Ny UNICEF Madagascar dia nanome anarana, ho Mpanohana ny Zon’ny Ankizy, ny Printsesy ZOENDRENINY Elakovelo, izay hanohana indrindra ny UNICEF any amin’ny faritra atsimon’i Madagasikara. Amin'ny maha mpiaro ny zon'ny ankizy azy, ny Printsesy dia hampiasa ny heriny hampiroboroboana ny fiovana ara-tsosialy eo amin'ireo vondrom-piarahamonina marefo, indrindra manoloana ireo fanamby any atsimo amin'ny sehatra maro, toy ny fanjarian-tsakafo, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny rano sy fidiovana ary ny fiarovana ny ankizy. Ny Printsesy ZOENDRENINY Elakovelo moa dia filoha nasionaly sy mpanorina ny Fédération des Communautés Royales Traditionnelles, Coutumières Culturelles de Madagascar, Vice Présidente du Chambre Royale de la Diaspora de l'Afrique de L'Est.
jeudi, 28 avril 2022 09:52
Finoana : Fetin'Eid Al-Fitr ny 02 may 2022, andro tsy iasana fa handraisana karama
Ho an'ny finoana Silamo, dia ny 02 may 2022 izao no ankalazana ny fetin'Eid Al-Fitr, izay tafiditra ao anaty lisitry ny tetiandro-panjakana ho andro tsy hiasana nefa andraisan-karama. Izany moa dia notanterahina araka ny daty notondroan'ny "Fikambanana Silamo Malagasy", izay nandraisan'ny Ministeran'ny Asa, ny fampananan'asa, ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy, izao fanapahana izao.
lundi, 18 avril 2022 16:03
Zaridaina botanika Ambohijatovo : Natao omeko tsy omeko
Niveri-maina ireo andiana mpitsangatsangana nikasa ny hiditra ao amin’ny zaridaina Ambohijatovo, lasa Parc botanique d'Ambohijatovo ankehitriny. Mihidy ny vavahady, ary soratra fotsy amin’ny takelaka efamira no mivandravandra ao anatiny tazan’ny maro milaza fa « Tsy mivoha ny zaridaina ny Alatsinainy. Misaotra tompoko ». Tsy vitsy ireo fianakaviana misafidy io toerana ireo rehefa fotoana toy izao, mba hamalifaliana ny zanany sy hakana sary fahatsiarovana, saingy tsy tanteraka izany androany hany ka diso fanantenana izy ireo ankoatra ireo mimenomenona sy manome tsiny. Nosokafana ho azon'ny mpitsangatsangana nidirana ihany indray moa ny toerana nony tolaka ny andro noho ny firodorodoan'ny olona. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 19 mars 2022 19:07
Mpanakanto : Nodimandry i Kelly Rajerison
Nodimandry androany sabotsy 19 martsa 2022 teo amin’ny faha-63 taonany i Kelly Rajerison, rehefa niady tamin’ny aretina Alzeihmer tao anatin’ny volana vitsivitsy. Mpanakanto feno i Kelly, isany mpikambana mpamorona ny tarika Pumpkins. Anisany hira nahafantaran'ny maro azy, ary navaozin'ny Mpanakanto tanora ny "Tsitsitsiky lava", "Taratasy ho anao", "Toerana iray", ... Efa Mpanentana fandaharana tao amin'ny Radio Madagasikara izy. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 15 janvier 2022 09:23
15 janoary : Hatokana ho Androm-pirenena ho an’ny Kabary malagasy
Hambara anio Sabotsy 15 janoary 2022, mandritra ny lanonam-panjakana, ny maha harem-bakoka ara-tsain’ny zanak’olombelona ny Kabary malagasy ny maha « androm-pirenena ho an’ny kabary malagasy » ny datin’ny 15 janoary. Eny amin’ny Lapan’Andafiavaratra no hanaovana ny lanonana. Hisy ny loa-bary an-dasy andinihana lohahevitra mahakasika ny Kabary.
mardi, 21 décembre 2021 12:17
Fiofanana siteweb : 60 mianadahy notolorana marim-pahaizana
Mpiofana miisa 60 mianadahy mpisehatra amin'ny fizahan-tany no notolorana marim-pahaizana, niompana indrindra amin'ny seram-barotra eo anivon'ny aterineto (Internet) na ny Digital Marketing, Community Manager ary Web 2.0. Ny tanjona dia ny hanapariahana ny toerana sy vohitra azo tsidihina eto Madagasikara, ka atao amin'ny alalan'ny tranon-kala na ny (Siteweb). Natao ihany koa mba hifehezana ny pitsopitsony rehetra mahakasika ny lamin'ady hapetraka eto anivon'ny aterineto hisintonana mpitsidika, ka hiteraka tombontsoa hoan'ny tsirairay, hoy ny manam-pahaizana manokana momba ny Sera ara-Teknolojia, ary mpitantana ny Web Agency e-fandray.com izay namapanao ny fiofanana, Nyh Gabriel Andriamitantsoa. Ny tetik'asa MIATRIKA COVID no tompon'antoka, izay vatsian'ny Banky iraisam-pirenena vola. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 13 novembre 2021 19:48
Zavakanto : Nodimandry i Biry (Railovy)
Very olomanga ny tontolon'ny mozika Malagasy. Nodimandry androany 13 Novambra 2021 teo amin'ny faha 87 taonany i Biry. Mpamoronkira, mpihira ary anisany namorona ny tarika Railovy niaraka tamin'i Jérôme Randria, rahalahiny izy.
Nanao fitsidihana ara-panajana ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha io maraina io ny Fivondronamben’ny Eveka, notarihin’ny Kardinaly Désiré Tsarahazana. Nisy ny fifidianana Birao vaovao teo anivon’izany Fivondronambe izany, izay nampahafantarina ny Filoham-pirenena tamin’ity fotoana ity. Ireto ireo mpikambana vaovao handrafitra izany manomboka izao :
mercredi, 27 octobre 2021 14:33
Tokontaniben'ny ORTM Anosy : Hananganana mozean'ny vakoky ny haino aman-jery
Hananganana fotodrafitrasa ho mozean'ny vakoky ny haino aman-jery na Havoria ilay tokontaniben'ny ORTM Anosy, toerana nisy ny RNM may nisy nandoro ka kila hotohoton’ny afo nandritra ilay Alatsinainy Mainty ny 26 janoary 2009. Tonga nametraka ny vato fototry ny fanorenana ny Havoria, androany alarobia 27 oktobra 2021, ny filoha Andry Rajoelina. Notronin'ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena Christine Razanamahasoa, ny Filohan'ny Antenimierandoholona Herimanana Razafimahefa, ary ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina Lalatiana Rakotondrazafy. Haranty ao anatin'ity mozea ity ny fitaovana fahizay, miaraka amin'ny fampisehoana ireo horonan-tsary sy horonam-peo mirakitra ny tantaran'ny firenena. Mahazaka mpijery 700 ny Havoria, ary azo hanatanterahana ireo karazana seho lehibe, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. (Jereo Sary Tohiny)
mercredi, 27 octobre 2021 12:04
Asa-tanana Malagasy : Haranty amin’ireo Masoivohon'i Madagasikara any ivelany
Mikasa ny hampiranty ireo Asa-tanana Malagasy tsara kalitao any amin'ireo Masoivohon'i Madagasikara rehetra any ivelany ny Ministeran’ny Asa-tanana sy Hai-tao, tarihin’i minisitra Sophie Ratsiraka. Efa nisy ny fifanaraham-piarahamiasa nataon’ity farany sy ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, Patrick Rajoelina, ny amin'izany. Eo an-dalam-panatanterahana ny pitsopitsony mikasika izany ny Minisitera roa tonta ankehitriny. (Jereo sary Tohiny)